Miyay adag tahay helitaanka qof kuu qalma? Sideena u Heli Kartaa Qof Adiga Kuu Qalma.? | Arrimaha Bulshada
Home Bulshada Miyay adag tahay helitaanka qof kuu qalma? Sideena u Heli Kartaa Qof Adiga Kuu Qalma.?
Miyay adag tahay helitaanka qof kuu qalma? Sideena u Heli Kartaa Qof Adiga Kuu Qalma.?
Bulsha:- Maalin ka mid ah bisha Agosto kulka cadceddana yahay meel-dhexaad ayaa waxaa halka baska laga raaco xaafad ku taalo London soo istaageen labo dumar oo Soomaali ah, mid ka mid ah dumarkaasi ayaa waydiisay midda kale:
“Inantaadii ma dhamaysay jaamacadda?” .
“Haa” ayay ugu jawaabtay middii su’aasha la waydiiyay.
“Miyaa la guursaday?”
“Maya!” Oo middii ka wayneed ayaa weli guriga ii joogta.”
“Anigaba mid baa guriga ii joogta oo calafkeeda ayay sugeysa.”
“Baryahaan waa yaabnoo gabdhihii Soomaliyeed waxaa ku adag in ay helaan rag fiican oo dhaqda. Waxbeey barteen, waa shaqeeyaan, balse ragbaan jirin.”
Haddalkii u dhaxeeyay labada dumar waxa uu istaagay markii baskii ay sugayeen yimid.
Haddaba su’aasha meesha taalo ayaa ah labada dumar ma waxay dhaleecaynayeen ragga mise waxay cabiraayeen dhibaato jirto oo la xariirta guurka?
Haddaba si aan arrintaan jawaab ugu helno bal aan u fiirino si khaas ah.
Tirakoobkii 2001, waxa lagu muujiyay in soomalida ku dhaqan Ingiriiska in 46% rag yihiin halka 54% dumar yihiin. Cilmibaaris uu soo saaray Institute for Public Policy Research sanadkii 2007, waxaa lagu qiyaasay ragga soomaliyeed in ay yihiin 38% halka dumarkana ka noqdeen 62%. Taa marka lagu daro raga qayila iyo kuwa aan shaqeysan waxa ay muujinaysaa culeyska gabdhaha soomaliyeed kala kulmi karaan inay helaan rag ay guursadaan.
Gutteng and Secord oo wax ka qora kala badanaanshaha raga iyo dumarka waxa ay yirahdeen “Dumarka ku dhexnool bulsho dumarka ku badan yahay waxay dareemaan awood dari iyo qiimo daro kaga timaado bulshada.”
Labo arrimood ayaa sii cakiraaya culayska ka jira helitaanka qof ku haboon guursashada:
1 – dhaqanka soomaliyeed ma dhiiri geliyo guursashada dad qalaad, xitaa marmarka qaarkood waxaan la oggolayn kala guursashada qabiilada qaarkood. Taa waxay keenaysaa in gabdhaha ku sii adkaato sidii ay u heli lahaayeen rag isku meel ay ka soo jeedaan oo dhaqan kara.
2 – ragga soomaliyeed oo cuqdo ka qaba gabdhaha wax bartay iyo kuwa muujiyo isku kalsoonaansho buuxda. Haddaba su’aasha waxay tahay xaas wax baratay ma caqabad baa mise waa kaalmo dheeri ah oo ku soo biirtay qooyska?
Rag badan oo ka tirsan jaaliyaddaha ayaa dibadaha ka soo guursada, taana waxay sii yaraynaysaa oo ay sii murjinaysaa xaaladdii horay u jirtay oo ay gabdhaha soomaaliyeed ay ku heli kari lahaayeen rag si xushmad leh u dhaqda. Ku noolaanshaha dalkan England waxa uu wax badan ka beddelay dhaqanka iyo qaab ku dhaqanka guriga. Waxay raga wadamada kale u guur doonta ku doodaan inay dareemayaan inuu isbeddel ku yimid dumarka ku nool halkan waqti dheer. Wax ayna raggaasi sheegaan in aysan dumarkaasi u jajabsanayn sida dumarka ku nool Afrika iyo dalalka carbeed.
Bal haddaba aan u jileecsano dhinaca kale oo ah inay gabdhuhu ku doodayaan in aysan heli karin rag u qalmo oo ay guursan karaan.
Peter Hector, oo ah qoraha buuga la yiraahdo Love is no Guarantee, mar uu waydiiyay gabdhaha nooca uu noqonayo ninka ay jeclaan lahayeen in ay guursadaan waxay ku jawaabeen waa in uu noqdo: “Nin aan is fahmayno, deggan, dhaqaalo ku filan haysta, hal abuurleh, kaftan yaqaana, akhiyaar ah, aan ka cabsanayn inuu muujisto jeceylkiisa, diyaar u ah inuu mas’uul qaado reerna dhaqdo. Intaa waxaa dheer in uu qurxan yahay, muuqaalkiisana fiican yahay.” Gabdhaha soomaliyeed waxa ay ku sii darsan lahayeen waa in uu yahay nin diinta ku dhaqmo. Haddaba su’aasha meesha taalo ayaa ah rag noocaan ah sidee lagu helayaa isla markaan imisa ayay qaadanaysaa in rag noocaan ah la helo?
Gabdho ayaa ku dooda inaysan doonayn niman dhinac walba ka buuxa balse ay yar yahiin niman macquul ah oo dhaqda. Waagii hore waalidka ayaa isu dooni jiray labada is guursanayso balse xilliyadan dambe labada doonaya in ay isguursadaan iyaga ayaa iskeensada. Gaabdhaha qaar ayay ku adag tahay in ay la kulmaan rag gayaankooda ah. Goobaha waxbarashada, shaqada, iyo aroosyada ayaa ka mid ah meelaha inta badan ay ku kulmaan dadka guurdoonka ah.
Inta badan gabdhaha diyaarka u ah inay guursadaan waa ay dhameeyeen waxbarasho sidaa daraadeed ma tagaan goobaha waxbarashada ama waxay sii wataan waxbarashadooda jamacadeed maadama mid u qalmo ayan helin. Taas ayaana keenaysa in jaamacadaha kula kulmaam rag sharuudo badan wato ama meelo kale u hanqal taagaya.
Haddi aysan ku jirin waxbarasho waxaa dhici karto inay ka shaqeeyaan goobo ay ku yar yihiin rag soomali ah oo guurdoon ah amaba aysan joogin. Aroosyada waxa ay ka mid ahaan jireen meelaha ugu badan oo ay ragga iyo dumarka ku kulmaan. Balse diinta oo ku sii xoogaysanaysa soomaalida dhaxdeeda, aroosyada hadda badanaa ragga iyo dumarka isma dhexgalaan sidii hore. Taana waxay sii yareysay in wiilasha iyo gabdhaha is bartaan.
Haddaba maxay qaban karaan gabdhaha soomaliyeed marka ay ka tiro badan yihiin ragga isla markaas ay jiraan culays dhaqan?
Arrinta guurka ma aha arrin ku kooban gabdhaha oo qura, waa mashaakil xalkiisu sugayo jaaliyaddaha soomaaliyeed ee qurbaha ku nool. Aqoonsashada iyo ka hadalka arrintan waa talaabada ugu horaysa ee la qaadi karo.
Turxaan bixinta dhaqankeena, hagaajinta fahamka ka dhaxeeyo dumarka iyo ragga, iyo abuuris meelo ay ku kulmi karaan wiilasha iyo gabdhaha waxa ay keeni karaan xal u helidda culayska ka jira xagga guurka.
Waxay ragga u baahan yihiin inay is waydiiyaan cabsida ay ka qabaan gabarta wax baratay ama isku kalsoon: Ma cabsi run ah baa mise waa mid ay iyaga aamineen? Sidoo kale, ma qasabaa in dunida dacaladeeda la aado si loo guursado? Gabdhuhuna waxay u baahan yihiin in ay isweydiiyaan shuruudaha ay wataan in ay yihiin kuwa macquul ah? Sidoo kale diyaar ma u yihiin in meel dhexe la isugu yimaado?